मण्डपमा बाबुको शव राखेर विवाह! यस्तो छ कारण - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
मण्डपमा बाबुको शव राखेर विवाह! यस्तो छ कारण
२७ साउन, एजेन्सी । भारतको तमिलनाडु स्थित विल्लुपुरममा छोराको विवाहअघि नै एक व्यक्तिको मृत्यु भयो । तर उनको अन्तिम इच्छा पूरा गर्नका लगि छोराले पिताको शव अगाडि राखेर सात फेरा लगाए ।
३१ वर्षीय डी अलेक्जेण्डरको विवहा २ सेप्टेम्बरमा तय भएको थियो । तर शुक्रबार अचानक अलेक्जेण्डरका पिता देवमणीको मृत्यु भयो । देवमणी छोराको विवाहलाई लिएर धेरै खुशी भएर तयारीमा जुटेका थिए । उनको इच्छा थियो कि धुमधामका साथ छोराको विवाह गरिदिने । तर अचानक उनको मृत्युले परिवारलाई शोकमा डुबायो ।
तर अलेक्जेण्डरले निर्णय गरे कि पिताको काजकिरिया अघि नै आफ्नो विवाह गर्ने ता कि उनको इच्छा पूरा होस् । अलेक्जेण्डरले आफ्नो हुनेवाला दुलही २७ वर्षीया अन्नपूर्णानीसँग कुरा गरे । अन्नपूर्णानी एक विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । बुबाको काजकिरियाअघि नै विवाह गर्ने अलेक्जेण्डरको प्रस्ताव उनले स्वीकारिन् । दुवै पक्षले विवाहको तयारी गरे ।
अलेक्जेण्डर र अन्नपूर्णानी विवाह बन्धनमा बाँधिए । अलेक्जेण्डरले बुबाको शवलाई जन्ती लैजानका लागि शवलाई नुहाइधुवाइ गरी सफा बनाएर नयाँ कपडा लगाइदिए । शुक्रबार विवाह गरेर फर्किएपछि उनीहरुले शनिबार शवको अन्तिम संस्कार गरेका छन् ।
Previousविप्लव समूहका १७ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा
Nextबाजुरामा पहिरो, आठ परिवारले घर छोडे
राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु
Jan 19, 2020 | समाचार
लेबनानमा सरकार विरोध प्रदर्शनमा एकैदिन ४ सय जना घाइते
Jan 19, 2020 | विश्व
अन्तर्राष्ट्रियस्तर विष्फोटन पदार्थ छ, ढुक्क हुनुस् शङ्का नगर्नुस् : सेना
मन्त्रीको असन्तुष्टिपछि नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्षद्वारा राजीनामा
नेकपा सचिवालय बैठकः अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने